ရွာဆူပြီ !!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ရွာဆူပြီ !!!	42
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 15, 2014 in Creative Writing, Critic, My Dear Diary | 42 comments
မောင်သူရကြီးက ဗမာပီပီ. . .
ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ လက်ဖက်သုပ်လေးနဲ့ သိပ်ကြိုက်တာပေါ့။
( စကားမစပ် . . .သူကြီးရေ. . . လက်ဖက်သုပ်နဲ့ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ ဗမာရိုးရာအစားအသောက် စစ်/မစစ် ဗဟုသုတ ပေးပါဦး)
မောင်သူရ ကြိုက်တဲ့ လက်ဖက်သုပ်ဆိုတာက လက်ဖက်အညွန့်လေးတွေများများနဲ့ ခါးသက်သက်ဆိမ့်ဖန်ဖန် လက်ဖက်သုပ်လေ။
အံမယ် ပုဇွန်ခြောက်လေးကလည်း နီနီတွတ်တွတ် ပါဦးမှဗျားးး။
လက်ဖက်ညွန့်လေးတွေကို မိုးကုတ်မြို့က သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေက မကြာခဏပို့ပေးပါရဲ့။
ဒီက ပဲခြမ်းကြော်တွေနဲ့ သိပ်မလိုက်ဘူးဗျ။
အဲ မိုးကုတ်က လက်ဖက်အညွန့် နှပ်ပြီးသားလေးတွေနဲ့လိုက်တာကတော့ ယုဇန လက်ဖက်ထဲက အကြော်စုံဗျ။
သူကျ ကြွပ်ရွနေတာလေးက သူများနဲ့ မတူဘူး။ တမူထူးနေသလားလို့။
မိုးကုတ်က ပို့ပေးတဲ့ လက်ဖက်ညွန့်လေးတွေနဲ့ ယုဇနအကြော်စုံနဲ့ ပေါင်း သုပ်လိုက်တော့ အရသာက ထူးသမှ ထူးဗျားးးး။
(ဒီလိုပြောတော့ ယုဇန လက်ဖက်လုပ်ငန်းက ကြော်ငြာခ ပေးထားတယ်ထင်နေပါဦးမယ်။ မဟုတ်ရပါဘူး။)
အဲ့ဒီ လက်ဖက်သုပ်နဲ့ (မိုးကုတ်ကပို့တဲ့)လက်ဖက်ခြောက် မွှေးမွှေးလေးကို ကျိုချက်ခတ်ထည့်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်း ဖန်ဖန်မွှေးတေးတေး
ပေါင်းပြီး စားလိုက်/သောက်လိုက်တာ. . .
နတ်စည်းစိမ် သိကြားစည်းစိမ်ကို (မခံစားဖူးပေမယ့် စိတ်မှန်းနဲ့)
မလဲနိုင်ဘူးဗျို့. . .
(လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေကျဆိုတော့ ဆိုင်မှာ သောက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်း မကောင်းမကန်း အဖြစ်တညစ်ကို သောက်မိတိုင်း. . .) လက်ဖက်ခြောက် ကောင်းကောင်းမွှေးမွှေးလေးတွေနဲ့ ကျိုထားတဲ့ မိုးကုတ်လက်ဖက်ခြောက် ခတ်ထားတဲ့ရေနွေးကြမ်းလေးကိုသတိရမိတယ်။
အဲ ပြောနေရင်းနဲ့တောင် ရွာဆူပြီဗျို့. . .
ရွာ ဆူတယ်ဆိုလို့ ဂဇက်ရွာကြီး ဆူလေပြီ မထင်နဲ့ဦးမိတ်ဆွေတို့. . .
ဒီလို ဒီလိုဗျ. . .
ဟောဒီ မောင်သူရက လက်ဖက်ခြောက် မွှေးမွှေးဖန်ဖန်လေးနဲ့ ကျိုထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းကို
လက်ဖက်ခြောက်မွှေးမွှေး ဖန်ဆိမ့်သက်သက် အရသာလေးကို ပူပူလောလော သောက်မိတိုင်း မောင်သူရကြီးနေခဲ့တဲ့ ရွာကို သိပ်သတိရတာဗျ။
ဒါကြောင့် ရေနွေးကြမ်းကောင်းကောင်းလေးကို ”ရွာ”ရယ်လို့ အလွမ်းပြေ အမည်မှည့်ထားတာ။
အဲအဲ အခု ပြောနေရင်နဲ့ကို မောင်သူရကြီး ကျိုထားတဲ့
”ရွာ” ဆူနေပြီဗျို့. . .
၂၀၁၄၊ ဒီဇင်ဘာ ၊ ၈
အောင် မိုးသူ says: ငါသုတ်စားတဲ့လက်ဖက်သုပ်က တစ်မျိုး နောက်မှ ပို့စ်တင်လိုက်ဦးမယ်
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: တင်လိုက်စမ်းဘာာာာ
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဂါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး တကတဲ ရေနွေးကြမ်းရေးဒါမြန်းအေ ငါ့အဟုတ်မှတ်လို့ အပြေးအဖြန်းလာဒါ ခလုတ်တိုက်လို့ခေါ်လဲဒူးကွဲ မှောက်ရက်လဲပါကောလား။ နင့်ဟာတကယ်ရွာဆူဒါမှမဟုတ် ရွာတကယ်ဆူအောင် ဆိုင်းဘုတ်ထောင် ဒဂျီးကို ဆန်ဒပြမယ် ပွိုင့်များများတိုးရေးဒို့အရေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အဟိ
ကျနော့်ရဲ့ တကယ့်ရွာလေးက တကယ် ဆူသွားတာဗျ။
kai says: ရွာဆူအောင်.. နယ်စည်းမခြားအဖွဲ့အတွက်လည်း.. ပုလင်းဝယ်ပြီးပြီ..။
…. အနံ့မထွက်တဲ့.. ဗော့ကာ..။ ရေရောသောက်ခွင့်မရှိ..။ ၁.၇၅လီတာရှိပါ၏။
ရွာကာလသားအုပ်စုမူးရင်.. တအိမ်တက်စေ့.. ပြဿနာရှာကြမယ်.. လို့..။
ကယ်ပါ.. ကယ်ပါ.. ကယ်ကြပါ၏..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: ကြားသာကြား မကြင်ရ တော့ လုပ်ပြီ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: မန်းလေး တစ်ပုလင်း..ရန်ဂုန်တစ်ပုလင်းပို့မှာလား..ဒဂျီး..
လူကြုံမရှိရင်.. DHL ရှိတယ်..
ခင်ဇော် says: ဂလောက် ခန ခန ဆူတဲ့ဟာဂျီးမြန်းးး
နာတို့ ရွာလေးမြန်း ကြည့်။
တဂျီးကို ချစ်ကြောက်ရိုသေ ငြိမ်ဝပ် ပိပြားနေကြတာပဲ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: .အေးနော်…
ဘယ်မှာ ဆူလို့တုန်း.. အဟိ
ဂွစ်ဂွစ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ရေနွေးအကြိုက်ဆုံးလို့ ကြားဖူးတယ်….။
သူရို့…ရေနွေးကြိုပုံ၊ လက်ဖက်ခြောက်ခတ်ပုံ၊ သောက်ပုံတွေ တစ်ခါလား ဖတ်ရပေမယ့်…ခုတော့ မေ့သွားပြီ….။
အင်း….ကောင်းကင်ပြာလဲ…အရင်က ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ မသောက်ဖြစ်ပေမယ့်….
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ကောင်းကင်ပြာ ရေနွေးကြမ်း ကြိုက်တတ်နေတာကို…
ဖားသက်ပြင်း says: အို
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: စိတ်ညစ်ရင်…အုံးအွမ်လို့…အော်နေ…
ဂွစ်ဂွစ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 486
Swal Taw Ywet says: ကာတာရောက်မှ တဆောင်ထည်းနေ အိန္ဒိယကုလားတွေဆီက နည်းတခုရထားသဗျ။ လက်ဖက်ခြောက်နဲ့အတူ ပူစီနံ အရွက်လေးတွေထည့်ခပ်သောက်ကြည့်။ တော်ယုံမကောင်းတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်တောင် အရသာပိုကောင်းသွားသဗျ။ အရင်အဆောင်တုံးကတော့ စိုက်စရာမြေလေးရှိလို့ ပူစီနံအခင်းစိုက်ထားပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်တိုင်းခတ်သောက်ဖြစ်တာ။ အခုအဆောင်တော့ မြေပိုမရှိလို့ ရေသန့်ဘူးအလွတ်ထဲထည့်စိုက်ရမယ်ထင့်။ စမ်းကြည့်ပါလေ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဟုတ်.. ဦးစွယ်…
kai says: ပူစီနံက.. အစားအသောက်.. အချိုရည်.. အိုက်စ်ကရင်တွေမှာ.. မင့်..ပူမွှေးနံ့လေးအပြင်..အစိမ်းရွက်လှလေးမို့.. တန်ဆာဆင်သုံးတာ..။
ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်က.. စူပါမားကက်က.. စတားဘတ်တကပ်ဝယ်လာတာမှာ.. ကော်ဖီထဲပက်ပါးမင့်(peppermint)ထည့်ထားသဗျ..
နောက်ဆို.. ဆူရင်ပူစီခပ်ကြနော..။ ကျမ်းမာရေးညီညွှတ်သတဲ့..။
October 12, 2013 | By The Sleuth Journal | General Health
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ပူစီတွေအတွက် နံတဲ့အရွက်ပေါ့နော်
ဗမာပြည်မှာက ပူစီနှစ်မျိုးကလည်း ရှိသေးဆိုတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ကတော့ ပူစီနံကို မွှေးတယ်လို့သာထင်
ရေနွေးကြမ်းထဲတော့ အခုမှ စမ်းကြည့်ရမယ်။
kai says: လူမ=ပူစီ
ကြည့်ရတာ. Cat Woman ကြည့်ပြောတာလားမသိ..
Woman Pussy လို့.. Google Image search စေလို…။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Internet Search Engine တွေ မှာ ရှာတိုင်း ကောင်းတာ မဟုတ်မှန်း သိရက်ချွန်တယ်ဗျို့။
ကိုယ်ရှာသမျှ ကို နောက်က လိုက်ကြည့် နေနိုင်တာ သိရက်ကိုများ။
အဲဒီမှာ အဓိက အကြမ်းဖက် မှု စာလုံးပါလို့ ကတော့ မသကာင်္ ရင် FBI လာတာဘဲ မဟုတ်လား။
မြန်မာပြည်က ပိုပြီး ဟောင်းလောင်းပွင့်နေတာ မှ ဘယ်နေရာ က ဘာကို Browse နေတယ်တောင် သိနိုင်ဆိုဘဲ။
ဆရာ့ ဆရာကြီး တွေ ပြောတာဘဲ။
ရန်ကုန်မှာ ကန်ဘောင်ဘေးတို့ ဘာတို့မှာ မတ်တပ်ရပ်နေပြီး
မျက်စပစ် ပစ်ပြတတ်တဲ့ မမတွေကို ဗန်းစကားနဲ့
kai says: ယူအက်စ် အန်အက်စ်အေ က.. တကမ္ဘာလုံးရဲ့.. တက်သမျှအကုန်. .ကြည့်နေနိုင်တာဗျ..။
သတိထားဖို့က.. အင်တာနက်ဆိုတာကြီးနဲ့.. ကွန်ပြူတာဆိုတာကြီးက.. သူတို့တီထွင်ထားတာလေ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 2278
Ma Ei says: .ရွာဆူပြီ ဆိုလို့ တစ်ကယ်လားလို့ တစ်ကယ်တော့ ရွာ ဆူတာကိုး…
.စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာဆို ရေနွေးကြမ်းက ၀ယ်သောက်ရတော့တဲ့ အမျိုးဖြစ်သွားပီ…
.ဟိုတယ် Park Royal မှာ ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းအတွက် တရုတ်ပညာရှင်သီးသန့်ငှားထားရတာတဲ့…
.သူတို့ ရေနွေးကြမ်းက ပန်းကန်ထဲမှာ လက်ဘက်ခြောက်နဲ့ တစ်ခြားသီးပွင့်ခြောက်(ဂန္နမာပန်း၊ ဇီးသီး၊ လိုင်ချီးသီး၊ မုန်လာဥ၊ဂေါ်ဖီ၊ နောက်ဘာသီးမှန်းမသိတဲ့ နီနီသီးလေး) ထည့်ထားပီး ရေနွေးဖြူ ထည့်ရတာ..ရေနွေးကရားနှတ်သီးရှည်ကြီး ကို ပုံစံမျိုးစုံ အိုက်တင်ပေးလို့ ထည့်ပေးတာ …
သူကြီးလို comment ထဲမှာ ပုံလေးတင်ပေးလို့ရရင်ကောင်းသား…
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အဲဒါ အန်တီအိရေ အဲ့ဒါ
အခုမှပဲ ရွာဆူအောင် ဆန်ဒပြရမယ့်အချက် တွေ့သွားပြီ
သဂျီးလို comment ထဲ ပုံထည့်ပြလို့ ရရေး ဒို့အရေးး
Ma Ei says: တီရှပ်ဆင်တူဝတ်ပြီး ဆန္ဒပြကြမယ်လေ…
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အနီရောင် တီရှပ် ထပ် ထုတ်မယ်
မြို့တော်ခန်းမ အပေါက်ဝမှာ လူစုပြီး ပြကြမယ်
Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ရွာဆူမဆူတော့မသိဖူးဗျာ
manawphyulay says: အမှန်တော့ ရွာက အမြဲဆူနေတာ ခုမှ ဆူမယ်ဆိုရင် မဆန်းတော့ဘူးလို့ အဲ့လာ ၀င်ပြောတာ… မောင်သူရ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ရွာ စည်စေချင်တယ်
lu lu says: ခေါင်းစည်းကြောင့် လန့် သွားပါကြောင်း
လက်ဖက် ညွှန့် ကြိုက်ချင်းတော့ တူနေပါကြောင်း
ရေနွေးကြမ်းကို ရှမ်းပြည်မှာ အခါးရည် ဟူ၍ ခေါ်ပါကြောင်း
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အကြိုက်တူပြီ
Lay Pai says: မြေအိုး နဲ့ ရွာ က မှ သောက်လို့ အကောင်းဆုံးဗျ ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဟုတ်တယ်နော်
​မောင်​မိုဘိုင်း says: ကျနော် သိတာလေးပြောရရင်….
အဲ့သလို ရွာဆူနေတုံး ရေနွေးအိုးဖင်ကို လက်နဲ့ကိုင်ရင် မပူဖူးဗျ…..
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ကျနော့်ရှေ့မှာ ထပ် စမ်းပြမလား???
ဦးဦးပါလေရာ says: အဲဒီ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အရွက်ရဲ့ နာမည်က
ဦးပါ လာမှပဲ ဒီအရွက် အမည်မှန် နေရာမှန် ပြန်ရောက်ရှာတယ်
CharTooLan says: နမိတ်များဖတ်ရော့တလား အောင်သျဲလင်းရယ်…………. :'(
ခင်ဇော် says: နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူက အောင်ယဲလင်းမြန်းလား?? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အေးနော်
ဘိုလိုဂဘိုလို ခေါင်းစဉ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတယ်မသိ။
နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ဖို့. . .
ကျနော့်မှာ . . . ”လက်”
padonmar says: အဲဒါလေး ပြောချင်လို့ ၀င်လာတာ ကိုယ့်အရင် ပြောတဲ့သူတွေ ရှိနေပြီ။
ဘာပဲပြောပြော မုန်တိုင်းစဲသွားတဲ့ ကောင်းကင်ဟာ အကြည်လင်ဆုံးပါပဲ။
(မုန်တိုင်းကလည်း ခဏခဏ တိုက်တာခက်စ်)
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: .နောက်ထပ်ပိုစ့်တွေထဲမှာ
ရွာစည်ပြီ ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် တပ်ဦးမှပါ
ကျနော် ပြောသလိုဖြစ်ဖို့ လျှာစက်အာစက် သွားတပ်လိုက်ဦးမယ်
kai says: ( စကားမစပ် . . .သူကြီးရေ. . . လက်ဖက်သုပ်နဲ့ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ ဗမာရိုးရာအစားအသောက် စစ်/မစစ် ဗဟုသုတ ပေးပါဦး)
ရေနွေးကြမ်းကတော့.. စိနပြည်သား… စစ်စစ်..။
အဲဒါလာပြောတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.